Hlola iHaiti - World Tourism Portal
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili eHaiti
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha eHaiti
Bukela ividiyo ekhuluma ngeHaiti
Hlola iHaiti, i- I-Caribbean izwe elihlala ingxenye yesithathu yasentshonalanga yesiqhingi saseCaribbean iHispaniola. Ingxenye yesithathu empumalanga ye-Hispaniola ihlalwa yi- i-Dominican Republic. Enyakatho kuneNyakatho ye-Atlantic Ocean, kanti uLwandle lweCaribbean luseningizimu. IHaiti iyizwe elinoguquko, olujabulisayo olwedlule nekusasa lalo namanje alisaqinisekile. Yize iHaiti ibhekane nezikhathi ezinzima phakathi namashumi eminyaka edlule, imboni yezokuvakasha yaseHaiti ebigcwele ama-60 kuma-80s iyabuya. Izindawo zokuhlala kanye nokutshalwa kwezimali ziguqula leli gem elingacaci ukuthi libe indawo yabavakashi baseCaribbean
Isimo sezulu saso siyashisa futhi sinamachashaza lapho izintaba ezisempumalanga zinqamula khona imimoya yokuhweba, iHaiti ilele phakathi kwesivunguvungu sesiphepho futhi iba nesivunguvungu esinamandla kusuka ngoJuni kuya kuLwezi futhi iba nezikhukhula ngezikhathi ezithile, ukuzamazama komhlaba nesomiso.
Inentaba kakhulu, enendawo ebanzi, ephakathi nendawo ethafile ngasenyakatho. Iphuzu eliphakeme kakhulu yiChaine de la Selle e2,777m. Isimo sezintaba saseHaiti senza kube izulu labo abathanda ukuhamba nokuhlola
IHaiti yayihlalwa ngabomdabu baseTaino amaNdiya ngesikhathi uChristopher Columbus efika kwi-6 ngo-December 1492 eMole St Nicolas. UColumbus waqamba lesi siqhingi ngokuthi i-Hispaniola. AmaTaino ayengamagatsha amaNdiya angama-Arawak, isizwe esinokuthula esenziwe buthaka ngenxa yokuhlasela okunobudlova kwamaNdiya angamaCarib. Kamuva, izifiki zaseSpain zaletha ingxibongo nezinye izifo zaseYurophu iTaino eyayingenakugomeka kuzo. Kafushane nje, abomdabu baseTaino bacekelwa phansi. Akukho mkhondo owubonakalayo wegazi likaTaino eHaiti namuhla. Izakhamizi zamanje ezinezimpande zase-Afrika kanye / noma zaseYurophu.
Abahambi bamazwe onke bazofika eHaiti ngo I-Port-au-Prince (I-PAP) esikhumulweni sezindiza i-Aéroport Toussaint L'Ouverture Airport noma (CAP) i-Aéroport International Cap-Haïtien eNyakatho.
Izilimi ezisemthethweni zaseHaiti ziyisiFulentshi nesiHaiti saseKaiti (Kreyòl Ayisien), okuwulimi lwesiCreole olususelwa eFrance, kanti i-92% yamagama asuselwa olimini lwesiFulentshi nolunye ngokuyinhloko avela ezilimini zase-Afrika naseTaino, anezici zaseSpain. IsiHaiti isiCreole siwulimi lwendabuko lwabantu abaningi, kanti isiFulentshi siwulimi lokuphatha, noma ngabe kungu-15% wabantu baseHaiti kuphela abangasikhuluma futhi bangama-2% kuphela abakwazi ukukhuluma kahle.
ILabadee iyindawo yokuqashisa eqashiwe yiRoyal Caribe International. Yize kwesinye isikhathi kuchazwa ezikhangisweni njengesiqhingi ngokwaso, empeleni kuhlangana nabanye baseSpaniola. ILabadee iboshelwe kude nendawo ezungezile. Imikhumbi ehamba ngomgwaqo ifika futhi idonsa endaweni yokhonkolo esanda kwakhiwa. Ukuvakasha kufaka iMakethe yaseHaiti Flea, umdlalo wokudansa wendabuko waseHaiti, amabhishi amaningi, imidlalo yezamanzi, nendawo yokubeka amanzi. Kepha qaphela ukuthi kufanele ukhokhe ukuze ungene ngaphakathi. Futhi qaphela ukuthi abantu baseHaiti abavunyelwe ukungena ngaphakathi, ngakho-ke cishe yonke imali oyisebenzisile iya eRoyal Caribe International hhayi kubantu baseHaiti.
Muva nje idolobha laseJacmel, ngenxa yedumela laso njengengashintshi kwezepolitiki, ukwakhiwa kwalo kwenkathi yamakholoni yaseFrance, ukwakheka kwayo ngokwesiko okuhle, amabhishi ama-pristine kanye nomkhosi wamafilimu wasendlini bekuheha izivakashi zasekhaya nenani elincane lokuvakasha kwamanye amazwe.
Ukuheha okukhulu kweHaiti ngokuqinisekile iCitadelle La Ferriere, okuyinqaba enkulu kunazo zonke emazweni aseMelika. Ungabona izinganekwane nezikhali ezindala ezilele lapho. Ungahamba ngezinyawo noma ngehhashi. Yakhiwa njengesinyathelo sokuphepha ngokumelene nokuhlaselwa okuvela France, ngemuva kokuba abantu abalethwe eHaiti njengezigqila kanye nenzalo yabo bazivikele kuma-colonist aseFrance futhi basungula i-republic yokuqala yabansundu. Le nqaba uqobo lwayo yayisembusweni weNorth Haiti, eyayiphethwe nguHenri Christoph, omunye wabaholi bokuhlubuka kwangaphambi kwezigqila. Inqaba iyingxenye yomlando ocebile waseHaiti futhi kufanele iphathwe ngenhlonipho ngenkathi ivakashelwa. Ibuye ibe ngaphezu kwesiqongo sentaba, esizokunikeza nethuba lokujabulela ukubukwa okuhle ngaphezulu kweHaiti. Phansi kwentaba ungathola futhi amanxiwa enqaba uSans Souci, lapho unkosikazi kaHenri Christoph ayehlala khona.
Ngaphandle kwezingqinamba, isiko nomlando ocebile waseHaiti uvumele izwe ukuthi liqhubeke nomkhakha wezokuvakasha olinganiselayo futhi onamandla. Ngohambo oluzimele kakhulu lokuzungeza iHaiti akusebenzi ngempela noma akunconywa kodwa kube nokuvuselelwa kancane kwezokuvakasha selokhu kwaba nokuzamazama komhlaba.
IHaiti idume ngemakethe yayo engahlelekile kakhulu kodwa ejabulisayo. Yonke into iyathengiswa lapha isuka ekuthandeni okuhle ngokubabazekayo bezinto zezinto ezingabizi kakhulu. IHaggling ihlakaniphile futhi iyanconywa, njengoba iningi labantu baseHaiti lizokhokhisa abokufika okungenani inani eliphindwe kabili lemakethe. Kukhona nezitolo ezinkulu ezinkulu ezinkulu ezidayisa enhlokodolobha ezinikezela ngezinto eziningi ngamanani alungisiwe. IHaiti inomhlaba wezandla olindele ukufunwa.
Cuisine yaseHaiti ijwayelekile nge-métissage yaseCaribbean, ingxube enhle yemizwa yaseFrance neyase-Afrika. Kuyafana nangeSpanishi sayo I-Caribbean omakhelwane nokho bahlukile ebukhoneni bayo obuqinile bezinongo. Imbuzi eyosiwe ebizwa nge- 'kabrit', amaqatha enkukhu ethosiwe 'griot', inkukhu ene-Creole sauce 'poulet creole', ilayisi enekhowe lasendle 'du riz jonjon' konke kuyizitsha ezinhle nezihlwabusayo.
Ngasogwini lwezinhlanzi, ama-lobster kanye ne-conch atholakala kalula. IHaiti inezithelo ezinhle kakhulu ezifaka i-guava, uphayinaphu, umango (izithelo eziyigugu kunazo zonke zaseHaiti), ubhanana, amakhabe, isinkwa, isithelo, kanye noshukela omunyu osamlomo osikiwe futhi wahlohlwa emigwaqweni. Izindawo zokudlela emadolobheni amakhulu zinikeza ukudla okuphephile futhi okumnandi, futhi kuthathwa izinyathelo zokuphepha ngokudla namanzi ukuze izinto ziphephe.
Ukudla okujwayelekile kwesiHaiti kuvame ukuqukethe irayisi (imvamisa iba nsundu noma imhlophe). Ukudla okudumile ongakuthola kuthathwa emapulazini athosiwe, ingulube ethosiwe, kanye nesilayi se-cole njenge-topping eyaziwa kakhulu ngokuthi "i-pikliz".
Amanzi ompompi kufanele agwenywe. Phuza amanzi asemabhodleleni kuphela. Lapho amanzi asemabhodleleni noma amanzi abilisiwe engatholakali, ukhukhunathi osanda kuvulwa uhlinzeka ngamanzi nama-elektrronte asengozini encane yezempilo.
Iminyaka yobudala yokuphuza / yokuthenga utshwala i-16.
I-rum yaseHaiti yaziwa kahle. I-'Barbancourt 5 inkanyezi 'isiphuzo esisezingeni eliphakeme. I-'Clairin 'ingamanzi asendaweni omlilo owenziwe ngomoba ongathengwa emgwaqweni, ovame ukunambitheka ngamakhambi ahlukahlukene angabonakala efakwe ebhodleleni. I 'Prestige' ubhiya othandwa kakhulu, futhi osezingeni elifanele futhi ukunambitheka okuhle kakhulu. Qiniseka futhi ukuthi uzama isiphuzo se-'Papye ', uhlobo lobisi lwe-papaya oluqabula kamnandi ngaphandle kwamagama ngosuku olushisayo. I-Cremas yisiphuzo esiphundu esiphundu, esinoshukela esivela ebisini lukakhukhunathi.
Ungafunda izinto eziningi ngenkathi uhambela eHaiti, emsebenzini, noma ngokungasebenzi. IHaiti inomnyuziyamu otholakala EPort Au Prince lapho ungafunda khona ngomlando waseHaiti. Lokhu kufaka phakathi ukufunda ngobaba abasungula iHaiti, amasu okuvikela abawasebenzisile, amadokhumenti amadala, ngisho nomqhele kaHenri Christophe owabusa enyakatho Haiti kuma-1800s.
Kusungulwa iMyuziyam yaseTaïno (iTaïnos eyabahlali bokuqala baseHaiti), futhi imininingwane eminingi mayelana nalokhu iyaqhubeka
Uma uhlola iHaiti, qiniseka ukuthi uhambisana nezindaba zakamuva. Ukukhombisa kungenzeka, kepha akujwayelekile kakhulu.
Akuyona into ehamba phambili ukuhamba ebusuku, kepha kukhona izivakashi, amaphoyisa nezikhulu ze-UN ezizungeza, ikakhulukazi ebusuku.
Ipaki Lomlando Kazwelonke - ICitadel, iSans Souci, amaRamiers